काठमाडौंका निजी अस्पताल संचालक चितवनमा – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
काठमाडौंका निजी अस्पताल संचालक चितवनमा
२०७१ असार ८, आईतवार ०३:५६ गते
एम्बुलेन्स चालकलाई कमिशन ः बिरामीलाई भार
भरतपुर । राजधानीका नामी निजी अस्पतालका संचालकहरु चितवन धाउन थालेका छन् । चितवन आएर उनीहरुले एम्बुलेन्स चालकहरुलाई भेट्ने गरेका छन् । हिजो शनिबार ग्रान्डी हस्पिटलका संचालकले यहाँका एम्बुलेन्स चालकलाई एक रेष्टुरेन्टमा भेटेका छन् । हस्पिटल संचालकले आफूहरुले दिने सेवाको बारेमा जानकारी दिएको सहभागी एक एम्बुलेन्स चालकले बताए ।
यसअघि लाइफ केयर, यति, सिटी सेन्टर, अन्नपूर्ण न्यूरो, ग्रिन सिटी, मेगा अस्पताललगायतका हस्पिटलका संचालकले यहाँका एम्बुलेन्स चालकलाई भेटिसकेका छन् ।
उनीहरुले बिरामी लगेवापत के कति रकम दिने व्यवस्था छ भन्नेबारे केही बताएनन् ? भन्ने प्रश्नमा ती चालकले भने, ‘सेवाका बारेमा बताए, रकमका बारेमा खासै केही बोलेनन् ।’ उनले आफूहरुलाई फकाउनका लागि उनीहरु यहाँसम्म आएको प्रतिक्रिया दिए ।
अस्पतालका अनुसार फरकफरक रकम चालकलाई दिने गरिएको छ । राजधानीका अस्पतालले कम्तीमा पनि तीन हजार रुपैयाँ एउटा बिरामी लगेवापत दिने गरेका छन् । हस्पिटलले एम्बुलेन्स चालकलाई बिरामी ल्याइदिएवापतको रकम दिँदा आखिरमा बिरामी नै मर्कामा पर्ने हुन् ।
काठमाडौंमा रहेका निजी अस्पतालले एम्बुलेन्स चालकहरुलाई कहाँ हुनुहुन्छ भनेर दैनिक चासो लिने गरेका पनि छन् । कतै बिरामी लिएर काठमाडौं आउँदैछन् कि भन्ने आशयका साथ उनीहरुले चालकको नियमित सोधपुछ गरिरहेका हुन्छन् । ‘बिरामी लिएर यहाँबाट हिँडेको एम्बुलेन्ससँग बाटोमै रकम मोलमलाइ हुन्छ’, एम्बुलेन्स चालकहरुको संगठनका अध्यक्ष नवराज लामिछानेले भने, केही एम्बुलेन्स चालकहरु गल्ती होलान् तर यो मामलामा निजी अस्पतालहरुको पूरै गल्ती देखिन्छ ।’
उनले थप भने,‘हामीले बिरामीसँग भाडा लिएका हुन्छांै, थप पैसा दिउँला भनेर तिनैै अस्पतालले चालकलाई प्रलोभनमा पार्ने काम गर्छन् ।’ चालकलाई दिने रकम अन्ततः बिरामीकै खल्तीको हुने भन्दै आफूले आफ्नो संस्था मातहतमा रहेका चालकहरुलाई कुनै पनि निजी अस्पतालबाट पैसा नलिन र बिरामीले भनेको अस्पतालमा बिरामी लैजान निर्देशन दिने गरेको बताए ।
‘चितवन आउनुको उनीहरुको मुख्य उद्देश्य भनेको यहाँका बिरामीलाई उनीहरुको हस्पिटलमा लैजाने वातावरण बनाउन हो’, ती चालकले भने । एम्बुलेन्स चालकलाई निश्चित स्थानमा भेटेर उनीहरु पूर्ण सहयोग होस् है भन्दै राजधानी फर्कन्छन् । अन्य ठाउँबाट उपचारका लागि बिरामीहरु भरतपुर ल्याइन्छ ।
दुई ठूला मेडिकल कलेज, भरतपुर अस्पताल, क्यान्सर अस्पताल र अन्य निजी अस्पतालमा दैनिक सयांैको संख्यामा बिरामी आउने गर्छन् । धेरैजसोको यहीँ नै रोग पत्ता लगाइ उपचार सम्भव हुने गरेको छ । तर, उपचार सम्भव नभई काठमाडौं लैजानु परेमा कुन हस्पिटलमा लगिन्छ ? प्रश्नको जवाफ सहज छ । जुन अस्पतालले बिरामी लगेवापत एम्बुलेन्स चालकलाई पैसा दिन्छ, त्यहाँ पु¥याइन्छ ।
जटिल रोगका बिरामी रिफर गरेवापत यहाँका डाक्टरहरुले पनि ती अस्पतालबाट रकम बुझ्ने गरेका छन् । उपचारको नाममा बिरामीलाई अस्पतालमा धेरै दिन राखेर पैसा रित्तिएपछि बिरामी रिफर गर्ने काठमाडौंका अस्पतालहरुको चलन छ ।
राजधानीका अस्पताल कुन के कस्तो भन्नेबारे कतिपय बिरामी र तिनका आफन्त जानकार नहुनुको फाइदा एम्बुलेन्स चालकहरुले लिँदै आएका छन् । केही महिनाअघि अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा एम्बुलेन्स चालक र सम्बन्धित अस्पतालले बिरामी ल्याएवापत दिने रकमको सम्बन्धमा समाचार प्रकाशित भएको थियो ।
समाचार सार्वजनिक भएपछि राजधानीका अस्पतालले बिरामीबाट कतिसम्म लुट्छन् भन्ने प्रष्ट भयो । साथमा उनीहरुको एम्बुलेन्स चालकसँगको गैरकानुनी सम्बन्ध पनि पर्दाफास भएको थियो । यस्ता घटना सार्वजनिक भएपछि अस्पतालले नचिनेका एम्बुलेन्स चालकसँग पैसा बार्गेनिङ गर्न छाडेका छन् ।
एक एम्बुलेन्स चालकले भने,‘बिरामी अस्पतालमा ल्याउनुहोस् अनि अरु कुरा गरौंला भन्छन् ।’
अस्पतालको नाम चालकको भागमा
सिटी सेन्टर, कलंकी सात हजार
ग्रीन सिटी, समाखुसी पाँच हजार
लाइफ केयर दस हजार
मेघा हस्पिटल पाँच हजार
अन्नपूर्ण न्यूरो तीन हजार
यति हस्पिटल तीन हजार
शिवज्योति अस्पताल पाँच हजार